Al-Shabaab oo War kasoo saartay 1000-ka Dhalinyaro ee Dowladda Shaqaaleysiineyso. | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Al-Shabaab oo War kasoo saartay 1000-ka Dhalinyaro ee Dowladda Shaqaaleysiineyso.
Al-Shabaab oo War kasoo saartay 1000-ka Dhalinyaro ee Dowladda Shaqaaleysiineyso.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa bishii tagtay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir amray in maamulka Gobolka Banaadir uu shaqaaleyso kun qof (1000) oo Dhalinyaro ah, kuwaa oo wax ka bartay Jaamacadaha iyo iskuulada gaarka ee Muqdisho ku yaal.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa dhawaan soo bandhigay Shaqooyinka dhalinyaradaasi ay u kala qorsheeyeen, waxa uuna sheegay in Qaarkood la barayo Farsmada, qeyb loo sameynayo Shaqo abuur sida shaqooyinka Fud-fudud.
Af-hayeenka Dhanka Howlgalada Al-Shabaab Cabdi Casiis Abuu Muscab ayaa Warbaahinta Al-Shabaab u sheegay in Dowladda ay dooneyso in 16-ka Degmo ee Gobolka Banaadir ay ka shaqaaleysiisato 55-dhalinyaro ah sida uu Hadalka uu dhigay.
Waa uu sii hadlay waxa uuna Tibaaxay in uu ehelada dhalinyarada kamidka ah kunka ugu baaqay in ay carruurtooda ay u jiheeyaan wado ka duwan Middaan sida uu sheegay.
Af-hayeenku waxa uu Tusaale ahaan usoo qaatay in Mushaar ahaan Dowladda ay u siineyso $100 (Boqol Doollar) ama $150 (Boqol iyo Konton Doollar), waxa uu Waalidiinta Dhalinyaradaasi ugu baaqay in aysan u ogolaan Maadaama uu sheegayo in Dhaqaale badan ay kaga soo bixiyeen Waxbarashadoodii Jaamacadaha iyo Heerarka kala duwan ee Iskuulada.
Ugu dambey waxa uu Sheegay in Ay bartilmaameedsan doonaan Dhalinyarada ka qeyb qaata Mashruucaan, qorshahaanine waxay Shaaciyeen in ay Qaramada Midoobe ay ku Maalgalineyso Dowladda Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa Mashruucaan ku sheegtay in uu wax badan ka badalayso Shaqo la’aanta heysata Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaarkood Muddo Shaqo la’aan ku heysatay dalka.